Toriteny Alahady 13 Jolay 2014 | FJKM Amboniloha
Toriteny Alahady 13 Jolay 2014
Mika 4:1-7 / Lioka 19:1-10 / Titosy 2:6-15
Izay rehetra mitady an’Andriamanitra amin’ny fony dia tena hahita Azy tokoa
Zakaiosy, lehilahy fohy kely, mpamory hetra, malaza ratsy amin’ny fametsifetsena sy fakana hetra mihoatra amin’ny rariny mpanota, fahavalon’ny fiaraha-monina indrindra ny vahoaka nefa dia nomen’ny Jesoa famonjena teo noho eo. Araho ny tantarany mba hanovozantsika ny fampianarana.
1- Efa nanasa an’I Jesoa Kristy hanjaka eo amin’ny fiainako ve aho ?
Na dia tsy niteny aza tamin’ny vavan’i Zakaiosy dia tena nahagaga fa nanery ny fony mafy ny hahita izany Jeso izany . tsy ny vola no nahory azy na ny fanasitranana no notadiaviny , azo lazaina fa nilamina ny fiainany raha ny hita ety ivelany , saingy tsapany kosa fa tsy naha sambatra azy izany. Nitady izay hahitana an’I Jeso tamin’ny fomba rehetra izy
Lesona : Ho ahy sy ianao , raha tsy misy mahory , tena vonona hitady an’I Jeso ve? Mba mangetaheta ny hampiditra an’I Jeso hanjaka amin’ny fiainako ve aho sa ampy hampiadana ahy ny eo an-tanako ? ho an’ny sahirana kosa , moa amin’ny fotoana sarotra ihany ve no tena ilàko ny Tompo ? Mitaona anao izao Tenin’Andriamanitra izao mba hanasa an’I Jeso hanjaka eo amin’ny fiainana na ory isika na malahelo.
2- Dia ho hita eo amin’ny fiainanao Jesoa Kristy
Rehefa manaiky hampiditra an’I Jeso ao am-po isika dia azo antoka fa hiditra tokoa Izy ary tena miasa. Miasa eo amin’ny fiainanao Izy ka ny Fanahy Masina no omeny ho mpampianatra mba hiaina amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra ka handà ny asan’ny nofo. Tsarovy tsara fa izay nanaiky nandray ny Tompo eo amin’ny fiainany dia iandrasany voa tsara .
Lesona : Rehefa nanaiky hampiditra an’I Jeso aho, dia miroso ho amin’ny fahatsarana ny fiainako ; tonga amin’ny fibebahana ka ny ratsy fanaoko hatramin’izay dia hovain’ny Tompo ho fiainana feno fahamasinana (fiteny , toetra , fomba fanao sns…) izay ilay antsoina hoe nibebaka ary dia haharesy lahatra ny maro fa tena momba anao tokoa Andriamanitra.
Hafatra : Miandrandra famonjena ve ianao ? natao ho an’ny olona rehetra ny famonjena hoy ny Tompo , fanapahan-kevitra hentitra no andrasan’ny Tompo aminao dia Asao Jeso hiditra amin’ny fiainanao , minoa an’I Jeso fa ny mino ihany no voavonjy [ Mino = Ny momba ny fiainanao rehetra dia tena miankina tanteraka amin’I Jeso] . Tandremo mba tsy hanao zavatra mifanipaka amin’ny Sitrapon’Andriamanitra, fa tsy misy fifanarahana ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Ary taomy koa ny hafa hanana fiainana miaraka amin’ny Tompo fa aoka tsy hanavakavaka .
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 18 juillet 2014